Arsenal oo dooneysa in ay ka saxiixato seddex kamid ah xidigaheeda,,,, - Jazeera FM
Arsenal oo dooneysa in ay ka saxiixato seddex kamid ah xidigaheeda,,,,
December 7, 2017 admin featured
Arsenal ayaa ku dhawaaqday in seddex ka mid ah ciyaartoydeeda ay qandaraaska u saxiixeen kooxda.
Matt Macey, Ben Sheaf iyo Eddie Nketiah ayaa dhamaantood ciyaaray tartamada koobabka xilli ciyaareedkan, tababare Arsene Wenger ayaa doorbiday inuu ku abaalmariyo seddexda ciyaaryahan ee heshiis cusub, inkastoo uusan qandaraaska la shaacin.
Goolhaye Macey ayaa 23-jir noqday bishii September, laakiin ka dib markii uu ka soo bilowday Norwich City iyo Red Star Belgrade xilli ciyaareedkan, waxaa la siiyay fursad uu ku sii dheereynayo joogitaankiisa Waqooyiga London.
Sheaf – oo 19 jir ah oo khadka dhexe ka ciyaara ayaa hal kulan u saftay kooxdiisii hore, isagoo kulankiisii ugu horeysay ka soo muuqday kulankii Red Star Belgrade bishii October.
Weeraryahanka da’da yar ee Nketiah ayaa afar kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkaan, iyadoo 18 jirkaan uu si dhaqso ah u soo jiitay isagoo dhaliyay labo gool oo ka mid ah EFL Cup uu ka badiyay Norwich City.
Bishii lasoo dhaafay, Arsenal ayaa heshiis waqti dheer la gaartay ciyaaryahanka da’da yar Joe Willock, kaasoo sidoo kale xilli ciyaareedkaan u ciyaaray kooxda koowaad.
The post Arsenal oo dooneysa in ay ka saxiixato seddex kamid ah xidigaheeda,,,, appeared first on Goolasha.net.
← David Silva oo seegi doono kulanka Manchester United
AC Milan oo ka fiirsaneysa inay lasoo saxiixato weeraryahanka Arsenal ee,,,,,,,,,,,, →